समाचार - मलाई सोध्नुहोस् PF तातो सिक्किने फिल्म के हो, के तपाइँ तल बताउनु हुन्छ?
मलाई नसोध्नुहोस् PF तातो सिक्किने फिल्म के हो, तल तपाईलाई बताउनुहुन्छ?
पीओएफ गर्मी-संकुचन योग्य फिल्मले विभिन्न आकारहरू सहित उपन्यास प्याकेजिaging कन्टेनरहरूको प्रयोग पूरा गर्दछ। यो गैर-विषाक्त, गन्ध रहित, तेल-प्रतिरोधी, र खाद्य स्वच्छता अनुरूप चलचित्रले designers० ° लेबल डिजाइन प्राप्त गर्न डिजाइनरहरूलाई आँखा-रमणीय र use्ग प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। रचनात्मकता र कल्पनालाई पूर्ण खेल दिनुहोस्, ताकि पेय पदार्थ र अन्य वस्तुहरू लेबल प्रयोगमा अधिक स्पष्ट हुन्छ, शेल्फमा छवि हाइलाइट गर्नुहोस्, र एक अप्रत्याशित कन्टेनर प्रभाव उत्पादन गर्दछ। पीओएफ गर्मी सिक्न योग्य फिल्म उद्योगमा, कम्पनी घरेलू बजार शेयरमा पहिलो र विश्वव्यापी बजार शेयरमा दोस्रो स्थानमा छ।
पीओएफ तातो सिक्न योग्य फिल्म उत्पादनहरूलाई तीन वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ: पीओएफ साधारण चलचित्र, पीओएफ क्रस-लि film्क गरिएको फिल्म, र पीओएफ विशिष्ट प्रयोगहरू र प्रक्रियाहरूको अनुसार उच्च प्रदर्शन फिल्म। वर्तमानमा कम्पनीको बिक्री राजस्व र यी तीन प्रकारका उत्पादनहरूको कुल नाफा company%% भन्दा बढीको लागि जिम्मेवार छ कम्पनी राजस्व र नाफाको मुख्य स्रोत हो। २०१Q क्यू १ मा, कच्चा माल लागतमा भएको गिरावट जस्ता कारकहरूको कारण, कम्पनीको उत्पाद जम्मा नाफामा वृद्धि भयो। पहिलो त्रैमासिकमा, यसले २,,65656,6०० युआनको निवल नाफा प्राप्त गर्‍यो, जुन २ parent8.१5 प्रतिशतको बर्षे बर्ष बढेको अभिभावकको लागि उपयुक्त छ।
१) पीई गर्मी-संकुचन योग्य फिल्म मदिरा, क्यान, खनिज पानी, विभिन्न पेय पदार्थ, कपडा र अन्य उत्पादनहरूका सम्पूर्ण विधानसभा प्याकेजिंगमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। उत्पादसँग राम्रो लचकता, प्रभाव प्रतिरोध, अश्रु प्रतिरोध, र ब्रेक गर्न सजिलो छैन। , ज्वारको डर छैन, ठूलो संकुचन दर;
उठाउन र काम गर्न सजिलो। उच्च कडाई, कम मलाई, उच्च-गति उत्पादन लाइनहरूको स्वचालित प्याकेजि forको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। पीवीसी प्रशोधन प्रक्रियाले अस्थिर पदार्थ उत्पादन गर्दछ, जुन मेकानिकल क्षति गर्न सजिलो छ, र यो सीलिंग रडमा टाँसिन सजिलो छ, जुन काम गर्न असुविधाजनक छ र यसलाई कायम राख्न गाह्रो छ। Safety. सुरक्षा पीओएफ सिको प्याकेजि After पछि, मोहर को चार कुना नरम छन्, मानव हात काट्ने छैन, र मलाउने प्रतिरोधी हो। PE संकुचन प्याकेजि After पछि, सीलको चार कुनाहरू नरम छन् र मानव हातहरू काट्ने छैन। पीवीसी सिको प्याकेजि After पछि, मोहर को चार कुनाहरु कडा र तीखा, सजिलो कटौती र bleed हो। Environment. वातावरण संरक्षण र सरसफाई पीओएफ गैर विषैले हो, प्रशोधनको क्रममा विषाक्त गन्ध उत्पादन गर्दैन, र यूएस एफडीए र यूएसडीए मापदण्डहरू पूरा गर्दछ। पीई गैर-विषाक्त छ, प्रशोधनको क्रममा विषालु ग्यास उत्पादन गर्दैन, र यूएस एफडीए र यूएसडीए मानकहरू पूरा गर्दछ। पीवीसी विषाक्त छ, र प्रशोधनले गन्ध र विषालु ग्याँस उत्पादन गर्दछ, र यसलाई बिस्तारै निषेध गरिएको छ।
OPS सिक्का फिल्म (ओरियन्टेड पॉलीस्टीरिन) गर्मी सिक्न योग्य फिल्म एक नयाँ प्रकारको प्याकेजिंग सामग्री हो जुन अप्स हीट सिक्किने फिल्मको साथ वातावरण संरक्षण आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ। OPS गर्मी सिक्न योग्य फिल्म उच्च शक्ति, उच्च कठोरता, स्थिर आकार, र राम्रो चमक र पारदर्शिता छ। सुविधाजनक प्रशोधन, सजिलो रंग, राम्रो मुद्रण प्रदर्शन, र अत्यन्त उच्च मुद्रण रिजोलुसन। ट्रेडमार्कहरूका लागि जुन निरन्तर ठीक प्रिन्टि purs गर्दै छन्, यो सामग्रीमा पूर्ण रूपमा सुधार हो। उच्च संकुचन र ओपीएस फिल्मको शक्तिको कारण, यो विभिन्न आकारका कन्टेनरहरूमा राम्ररी फिट हुन सक्छ, त्यसैले यसले केवल उत्कृष्ट ढाँचा मात्र प्रिन्ट गर्न सक्दैन,
पोष्ट समय: डिसेम्बर ० 04-२०२०
Polyolefin Pof संकुचन फिल्म, Polyolefin लपेटो तापमान संकुचन, स्ट्रेच फिल्म बनाम संकुचित र्याप, र्‍याप फिल्म रोलहरू संकुचन गर्नुहोस्, फिल्म Pvc संकुचन गर्नुहोस्, Polyolefin Pof लपेटो,